Ukuphonononga iAcer Revo One RL85, iPC encinci ene "mini" encinci | Iindaba zeGajethi
Ukuphononongwa kwe-Acer Revo One RL85, iPC encinci ene "mini" encinci
UPablo Aparicio | | Iikhompyuter, Reviews
Namhlanje kukho iintlobo ezininzi zeekhompyuter, ayiyomfihlo leyo. Ingxaki kukuba kukho ezinye iikhompyuter ezimele ukuba ziluphawu olulungileyo kwaye azihlali ixesha elide njengoko besingathanda. Khange ndibenangxaki ngokobuqu kuyo nayiphi na ilaptops Acer endandinayo. Okwangoku ndibhalela kuwe ndisuka kwi-Aspire One D250 esele ikule minyaka kwaye andinasikhalazo. Kungenxa yoko le nto kwakhona Ndiqala kancinci kunamava am amnandi ngeAcer.
Oko kwathethi, ukuba ufuna abasebenzisi kakhulu, ngaphandle kwamathandabuzo, eyona nto ilungileyo yikhompyuter yedesktop kwaye ulibale malunga neelaptops. Iilaptops zilungile, kodwa zibiza kakhulu kwaye zincitshisiwe kuneekhompyuter ze "tower". Ukuba awufuni nqaba enkulu, eyona nto intle ukuyenza kukuthenga iMini PC, efanayo kodwa nezixhobo ezithobekileyo kwindawo encinci. Eyona PC ilungileyo (elungileyo) encinci yi-Acer Revo Inye RL85, ikhompyuter enehard drive enomthamo omkhulu oya kusivumela ukuba sigcine yonke into esiyicingayo kwaye, ngeyona ndlela, sinokufikelela kwidatha yethu naphina emhlabeni.
1 Imixholo yebhokisi
3 Ukucaciswa kweAcer Revo One RL85
5 Windows RT
5.1 Ikhibhodi / uMlawuli
5.2 Izicelo zeAcer
I-Acer Revo One RL85.
Ikhibhodi / isilawuli.
Njengoko ubona kwimifanekiso, i-Acer ayifuni ukwenza inqaba ejongeka njengekhompyuter. Ukubona i-RL85 kubonakala ngathi le nto bebeyifuna kukuba le Mini PC ayijongeka imbi, umzekelo, ecaleni komabonakude. Ubume bayo oburhangqileyo kunye nobungakanani busikhumbuza ngezinto ezithile esizibeka kwitafile nganye, ukuze siqiniseke ukuba i-RL85 ayizukutsala umdla ombi naphina apho siyibeka khona.
Ukucaciswa kweAcer Revo One RL85
Windows 8.1 x64 (iyahlaziywa)
Intel Core i3-5010U Dual-core 2.10GHz
I-8 GB, iDDR3L SDRAM
I-3 TB HDD (ubuncinci le nguqulo)
I-Intel HD Graphics 5500
I-Wi-Fi engama-802.11ac, i-Ethernet
Uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi, Mini DisplayPort, 3,5mm jack
2 i-USB 2.0, i-2 i-USB 3.0, umfundi wekhadi le-SD (ngaphezulu)
Ukusebenza kwe-RL85 kubonakala kulungile kakhulu kum. Kuyinyani ukuba uncedo oluyifakileyo Windows 10, kodwa asinakuthi le khompyuter iza nezixhobo ezilinganiselweyo. I-8GB ye-RAM kunye neprosesa ye-Intel Core i3 2.10GHz iya kuba yanele uninzi lwabasebenzisi kodwa, ngokusengqiqweni, iPC encinci ayicingelwa ukuba sisixhobo esifanelekileyo kwimidlalo yevidiyo yamva nje.
Ngexesha endikhe ndayisebenzisa, andikaze ndiqaphele ukuba le nkqubo iziva inzima ngaphaya kokumbalwa ixesha elide kunokuba ndingathanda. Ngapha koko, lo ngumsebenzisi ohlala esebenzisa uhlobo olukhanyayo lwe-Ubuntu kwaye usetyenziselwa ukuqala ngokukhawuleza.
Ikhibhodi / uMlawuli
I-Acer Revo One RL85, njengoko besesitshilo, yiPC encinci. Iikhompyuter ezincinci, njengoko senditshilo kwimixholo yebhokisi, ziza "zize" ngaphandle kwemida. Ikhibhodi, imouse kunye nescreen kufuneka zithengwe ngokwahlukeneyo. Kwimeko nayiphi na into, kwezinye iimodeli zabaphathi a keyboard ubungakanani isilawuli (inkulu kancinci) enamacala amabini: icala elinye kunye nebhodi yezitshixo nayo yonke into ofuna ukuyichwetheza kunye nesilawuli kude esifana kakhulu nomabonakude xa sinokuthi ikhompyuter yethu iqhagamshelwe kwiTV kwigumbi lokuhlala kwaye sifuna ukuyisebenzisa set-ibhokisi ephezulu. Inayo imakrofoni, ukuba sifuna ukubuza uCortana ngento ethile.
Ukuba asifuni ukusebenzisa iremote, kukho nesicelo esifumanekayo se-iOS kunye ne-Android eya kusivumela lawula iAcer Revo One yethu ukude. Into embi malunga nezicelo kukuba zisebenza kuphela ukuba asihlaziyi inkqubo yokusebenza, kwaye le Revo One sele ihlaziyiwe kum. Ukuba sijonga isicelo se-server, esona kufuneka sifakwe kwikhompyuter, asiyi kuyifumana. Esi sicelo sifakwe kuphela kwiikhompyuter ngaphandle kwebhokisi.
Umthuthukisi: Acer Inc.
Kodwa eyona nto intle kukuba, mhlawumbi, ukusebenzisa le PC incinci njenge ilifu lomntu. Ukuba singena kwiphepha labo iiapps Siza kubona ukuba kukho izicelo ezine ezikhoyo:
Nangona nganye inesizathu sayo, eyona inomdla kum yeyokugqibela, abFiles. Ukusukela abFiles Singafikelela kwi-hard drive ye-Acer Revo One yethu naphi na emhlabeni, ukuba nje sidityaniswe kwi-intanethi, kunjalo. Ayisiyo isicelo esivumela ukuba silawule i-desktop kude, kodwa kunokuba sikwazi ukuhamba kwiifolda kuyo yonke i-hard drive yekhompyuter yethu. Into elungileyo kukuba kwisicelo esinye sinokumamela umculo, ukubukela iividiyo kunye nokuvula amaxwebhu. Umzekelo, ukuba sithatha uhambo kwaye sifuna ukubona imovie esiyigcinileyo kwiRevo One yethu, sinokuyibukela kwi-smartphone okanye ithebhulethi yethu ngeapp abiles. Kulungile, hayi?
I-Acer Revo One RL85
Uphengululo lwe: UPablo Aparicio
Ihard drive enkulu
Ayihambelani esweni VGA
Iyahambelana kuphela ne-USB okanye iibhodi yezitshixo zeBluetooth
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Ukuphononongwa kwe-Acer Revo One RL85, iPC encinci ene "mini" encinci
Iinkampani zeTech ziyamanyana endaweni yomntu oyimfihlo
Iingcebiso ezili-10 zokuba yinkwenkwezi yokwenyani ye-Instagram